Telefoon cusub oo Oppo ah ayaa ka gudbaya shahaadada Bluetooth | Androidsis
Xaqiiqdi waa mid kamid ah shirkadaha ugu firfircoon markay timaado taleefoonada laga furo wadanka hooyo halka ay timaado inay degto. Oppo si aad u bilowdo taleefan la awoodi karo si dhakhso leh Iyada oo batari weyn leh, wax yar ayaa ah faahfaahinta bilowga ah ee midkan, in kasta oo ay hubaal tahay inaan si dhakhso leh ugu arki doonno tafaariiqleyaasha qaarkood.
Waxaad heshay helitaanka hore ee shahaadada Bluetooth, magaca nambarku waa CPH2015 magacyo kala duwanna ka helay gobollo kala duwan. Hindiya waxay u sameysay sidii Oppo A31, Indooniisiya waxay u timid sidii Oppo Reno S waana la arki doonaa haddii ay ugu dambeyn gaari doonto gobol kale oo caan ah gobol kale.
Wax walba oo aad ka ogtahay telefoonka cusub ee Oppo
In kasta oo faahfaahin yar, ka Oppo A31 / Oppo Reno S wuxuu yeelan doonaa shaashad dhan 6.5 ″ leh HD + qaraar, processor 2 GHz Mediatek ah iyo batari 4.230 mAh ah. Waxaa jira liistada kooxaha LTE iyo nooca Bluetooth, oo ah 5.0, sidaa darteed waa tan ugu dambeysa ee la heli karo.
CPH2015 waxay la socotaa Android 6.1.2 Pie's ColorOS 9, waa inaan sugno si aan u helno cusbooneysiinta ColorOS 7, taas oo ah wax iska caadi ah shirkadaha sugaya in la nadiifiyo Android 10. Waxaad si weyn ugu raaxeysan doontaa isdhexgalka la cusbooneysiiyay, laga bilaabo bogga guriga illaa astaamaha la cusbooneysiiyey, cabbirka xarfaha iyo midabbada asalka
Oppo A31 ama Oppo Reno S waxay muujineysaa jiritaanka heerka biyaha, dekedda USB-C ee salka ku heysa iyo qalabka dhegaha lagu dhegeysto ee 3,5mm. Waxay u badan tahay inay heli doonto naanaysta labaad ee jiritaanka A31 sannadka 2015, sidaas awgeedna la doonayo in magac cusub loogu bixiyo aaladda cusub.
Waxaan ogaan doonnaa dhammaan faa'iidooyinkeeda toddobaadyada soo socda, maaddaama Oppo uu doonayo inuu ka faa'iideysto si uu u muujiyo terminaalkiisa cusub dhowaan. CPH2015 uma iftiimiyo qaybahaXaaladda kaliya ee ay ugu wacan tahay batteriga rakibmay ee ka badan 4.000 Mah oo ku habboon haddii aan dooneyno inaan ku xirnaano cutubkan saacado badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Telefoon cusub oo Oppo ah ayaa ka gudbaya shahaadada Bluetooth